Igazi liya ngokuncipha ezikhungweni eziligcinayo - Bayede News
Igazi liya ngokuncipha ezikhungweni eziligcinayo
Isithombe: Igunundu Agency Images/nguSiyethaba Mhlongo
Kuphela unyaka golokoqo emveni kwesimemezelo sokuqala semvalelwakhaya
Igazi lingezinye zezidingo ezimqoka empilweni. Alidingeki kuphela lapho kukhona olimele kepha libaluleke kakhulu kobelethayo ikakhulukazi ohlinziwe ngoba uma sekuqediwe kumele afakwe igazi.
Muva nje isifundazwe iKwaZulu-Natal sizithola sinezibalo zegazi eziphansi kakhulu ukwedlula lezo ezivumelekile.
Inhlangano ethekelisa ngegazi kuleli iSouth African National Blood Services (SANBS) ithe ngoLwesibili bekunegazi elingenela usuku olulodwa. NgoLwesithathu bekunegazi lezinsuku ezi-2.4. EGoli kukhona elezinsuku ezi-4.7, e-Eastern Cape ezi-4.8, eMpumalanga ezi-4.3, eVaal ezi-3.8, eNorthern Cape kanye naseFree State njengoba behlanganisiwe banelezinsuku ezi-3.8. INorthern Zone, iLimpopo kanye neRusternburg banelezinsuku ezi-3.5.
Isikhulu sakwaSANBS eMidlands uMnu uKhulekani Zuma, uchazele elaboHlanga ngezizathu zokwehla kwezibalo zegazi kulezi zinsuku wathi: “Ngokuthola kwethu njengoba sisebenzisana nezibhedlela, ziyalithola igazi kodwa izinto eziningi sezivulelekile. Ukuhlinzwa kwabantu obekumisiwe ngenxa yemvalelwakhaya sekuvuliwe. Lokhu akusikho ukuhlinzwa okuphuthumayo kepha okwabantu abahlushwa yizinto ezithile emzimbeni okungabeki impilo yomuntu engcupheni kepha okuthuthukisa impilo. Lolo hlobo lwezinto ilezi ezimiswayo uma kunenkinga yegazi kanti njengoba kuyisigaba sokuqala semvalelwakhaya sezivulelekile. Kube izimo eziphuthumayo njengabantu abasuke bebe nezingozi okuvulelekile ukuba bahlengwe okudala igazi lisebenze kakhulu kodwa ngokokusebenza kwethu akukavuleleki konke.”
Uthe beyiSANBS bayazihambela izikole kepha ababatholi bonke abafundi ngesikhathi esisodwa ngenxa yokuthi bangena ngokushintshana okwenza sibe sincane isibalo sabafundi ababatholayo. UZuma uthe amabhizinisi amaningi izisebenzi zawo zisasebenzela emakhaya ngakho abakwazi ukuzithola. “Sesinqume ukuthi sisebenze ngendlela ehlukile siye lapho abantu behlala khona, ezindlini zomasipala, nasemahositela ukuze zikwazi ukunyuka izibalo,” usho kanje.
Echaza ukuthi lesi simo kulindeleke ukuba silungiseke nini uthe: “Kulukhuluni ukunikeza isikhathi njengoba izwe liphansi kwemvalelwakhaya, sisebenza ngendlela ethanda ukwehluka kulezi zinsuku nenginesiqiniseko sokuthi wonke umuntu ubhekene nenkinga efanayo, kodwa ngiyethemba ukuthi emva kwamaholidi ePhasika izikole sezibuyile emaholidini izinto zizothi ukwehluka isimo singathi ukuba ngcono. Manje sesizama ukuthi esikoleni ngasinye sibuyele kabili noma kathathu ukuze sithole bonke abafundi. Siyathemba ukuthi ukusebenza kanjalo kuzokwenza umehluko, kodwa lokho kuncike ekutheni izikole ziyabambisana yini nathi ngoba nazo zingaphansi kwengcindezi, kulesi sikhashana abanaso nabo bafuna ukuqeda ukufunda njengoba sekukhulunywa ngegagasi lesi-3 lokhuvethe akwaziwa ukuthi kuyovalwa nini.”
Isigaba sokuqala kube ngesithembisayo kuPSL
Ebuzwa ukuthi njengoba isimo sinjena kungenzeka yini kumiswe ezinye izinhlelo eziyizidingo zegazi uthe: “Angithandi ukwesabisa umphakathi ngithi kungenzeka kodwa kumele sibhekane neqiniso sibheke ukwenzeka kwezinto, uma isimo sokhuvethe siqhubeka sizozithola sifika kuleso sikhathi. Njengoba siphuma kusona ngoZibandlela kuzoqala unyaka wezi-2021 kade singakwazi ukuhlinzeka izibhedlela ngendlela.”
Uphethe ngokuthi: “Nalaba abamanqikanqika ukunikela ngegazi siyabaqinisekisa ukuthi ukunikela ngegazi kuphephile futhi ngeke bazithole betheleleka ngokhuvethe. Sikhumbuza abantu ukuthi ukunikela ngegazi kuklama indima enkulu ekutheni kwelapheke abahaqwe ukhuvethe.”
Amalungu omphakathi afuna ukunikela ngegazi angashayela ku: 082 3289687 uma efuna abakwaSANBS baye kuwo.
nguSiyethaba Mhlongo Mar 26, 2021